वराहक्षेत्र न. पा. Archives - inaruwaonline.com
सुनसरीमा ग्रामिण आमा स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालनमा ल्याइएको छ । प्रदेश १ सरकारको पहलमा संचालनमा ल्याइएको कार्यक्रममा सुनसरीका चारवटा स्थानीय तह समेटिएका छन् ।कार्यक्रम प्रदेश एकको तीन जिल्ला सुनसरी, इलाम र संखुवासभामा संचालनमा ल्याइएको छ । सुनसरीको हकमा बर्जु, दुहवी,बराहक्षेत्र र भोक्राहा नरसिंह कार्यक्रममा समेटिएका छन् । सुनसरीको बर्जुको चिमडी, दुहवीको सोनापुर र बराहक्षेत्रको मधुवन प्राथमिक स्व...
इनरुवामा समपन्न नक–आउट फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि चक्रघट्टीको कल्चर ग्रीन क्लबले जितेको छ ।फाइनलमा रुसडिक फुटबल क्लब इटहरीलाई पराजित गर्दैै चक्रघट्टीको ग्रीन क्लबले उपाधि चुमेको हो । खेलको छिनोफानो भने पेनाल्टी सुट आउटबाट लिइएको थियो । निर्धारित समयमा दुवै टिमले ३–३ गोलको बराबरी खेलेका थिए । पेनाल्टीमा कल्चर ग्रीनले ४–३ को नतिजा हात पारेको थियो । खेलको पहिलो हाफमा कल्चर ग्रीनले १–० को अग्रता बना...
सवारी दुर्घटनामा बराहक्षेत्र र हरिनगरमा १-१ जनाको मृत्यु
सवारी दुर्घटनामा परी २ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-१ करमखोला पुलमा प्रदेश १-०२-०४० प ५२९६ नम्बरको मोटरसाईकलले पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिंदा घाईते भएका स्थानीय ५५ बर्षीय धन बहादुर कार्कीको उपचारको क्रममा बि.पी.कोईराला स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मृत्यु भएको हो । ठक्कर दिने मोटरसाईकल ईलाका प्रहरी कार्यालय चतराले नियन्त्रणमा लिएको छ । घाईते मोटरसाईकल चालकको प्रतिष्ठानमा उपचार...
अंधकार श्रीलंका टापुमा नेता कार्कीको पहलमा उज्यालोमय
चतरा। बिकासका आधारभुत पक्षवाट समेत पछि परेको श्रीलंका टापुमा बल्ल बिजुली बत्ति पुगेको छ । २०७४ सालको संघिय निर्वाचनमा गाऊमा बिधुत ल्याउने कबुल गरेका नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको पहल र स्थानिय स्रोतको लगानीमा टापुमा बिधुत आएको हो । साँझ परेपछि टुकी र सोर्य उर्जाको मधुरो उज्यालोमा बस्ने श्रीलङ्का टापुका बासिन्दाहरूले यस बर्षदेखि भने बिधुतिय उर्जा प्र...
बराहक्षेत्रमा पहिरो पन्छाउदा खसेको ढुङगाले लागेर एकको मृत्यु
इनरुवा। सुनसरीको चतरा बराहक्षेत्र सडक खण्डमा पहिरो पन्छाउने क्रममा खसेको ढुङगाले लागेर पैदल यात्रीको ज्यान गएको छ । पहिरो खसेर अवरुद्ध सडक जेसीभीले खुलाउने क्रममा खसेको ढुङगाले लागेर पैदल यात्री भोजपुर घर भएका अन्दाजी २० वर्षिय राजकुमार राईको मृत्यु भएको हो । प्रहरीका अनुसार सडकमा खसेको पहिरो हटाउने क्रममा माथिबाट ढुङगा खसेको थियो । सुनसरीका प्रहरी प्रमुख कमल थापाका अनुसार ढुङगाले लागेर राईको ...
बराहक्षेत्र नगरपालिकामा अत्यावश्यक कामबाहेक प्रवेशमा रोक
प्रदेश नं. १ मा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै बराहक्षेत्र नगरपालिकाले अत्यावश्यक कामबाहेकका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय प्रवेशमा सेवाग्राहीलाई रोक लगाएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोप देशव्यापी रुपमा वृद्धि भइरहेको र बाहिरी जिल्ला तथा देशविदेशबाट समेत मानिस आवतजावत गर्ने क्रम जारी रहेकाले कार्यालयमा अत्यावश्यक कामबाहेक नगर कार्यपालिकामा प्रवेश गर्न रोक लगाएको प्रमुख प्रशा...
इनरुवा । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगर पालिका वार्ड न ८ भक्ति चोक नजिक सप्तकोशी नदिमा आज एक महिलाको शव फेला परेको छ। स्थानीयका अनुसार कोशी नदिमा दाउरा तानीरहेको बेला नदिले बगाएर नदि किनारामा अडकिएको अवस्थामा महिला शव फेलापरेको हो । कोशीमा दाउरा तान्न नै आएको हुन सक्नै अनुमान गरिएको छ। मृतक महिलाको उमेर ४० बर्ष हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। शव फेलापर्ना साथ स्थानीयहरुले प्रहरी प्रशासनमा खबर गरेर जानकार...
कोशीले स्पर कटान थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास जारी
इनरुवा। सप्तकोशी नदीले स्परमा कटान थालेपछि नियन्त्रणको प्रयास थालिएको छ । कोशीले बराहक्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने ठाकुरबारी क्षेत्रको १० नम्बर स्परमा कटान थालेको सुनसरी प्रशासनले जनाएको छ । प्रशासनका अनुसार सो क्षेत्रमा यतिबेला सुरक्षाकर्मी सहित स्थानीय र ठुलो संख्यामा कामदार खटिएका छन् । यसअघि पश्चिम तर्फ बहँदै आएको नदीको पानी पूर्व तर्फ सोझिदा स्पर नम्बर ९ र १० मा जोखिम बढाएको छ । दुवै...
सप्तकोशीले चतरामा वार्निङ लेवल फेरी नाघ्यो
इनरुवा। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहावमा उतारचढाव देखिएको छ । नदीले चतरा मापन केन्द्रमा सर्तकर्ता लेवल पार गरेको छ । पछिल्लो मापन अनुसार चतरामा कोशीको बहाव ६ दशमलव १३ मिटर पुगेको छ । क्रमशः चतराको मापनमा वृद्धि हुँदै गएको छ । राती सर्तकर्ता तह पारी गरी बिहान बाट कमी आएको चतराको बहाव घटेर एक घण्टा अघि ५ दशमलव ८१ मिटरमा झरेको थियो । यद्यपी विस्तारै माथि चढ्ने क्रममा देखिएको बहावले यतिबेला वार्निङ ले...